Xog-waran+Sawiro: Ciidamada Puntland Oo Guulo Ka Gaaray Hawlgalkooda Qandala – Puntland24.net
Home Somalia, Wararka Maanta, Xulka Puntland Xog-waran+Sawiro: Ciidamada Puntland Oo Guulo Ka Gaaray Hawlgalkooda Qandala
Xog-waran+Sawiro: Ciidamada Puntland Oo Guulo Ka Gaaray Hawlgalkooda Qandala
November 22, 2017 · by	Ilbir · 0
Taliyaha Ciidanka Difaaca Puntland Janaraal Siciid Dheere, ayaa ka Warbixiyay hawlgalo balaaran oo Ciidanka Puntland ay ka wadaan bariga fog ee Puntland.
Siciid Dheere ayaa sheegay inay guulo ka gaareen dagaalka ka dhan ah Daacish, ayna ka saaree deegaano badan oo ay ku dhuumaalaysanayeen, isla markaana ay ku wadaan baacsi firxadkooda.
Siciid Dheere ayaa sheegay inuusan hakad gali doonin hawlgalka ka dhan ah Kooxaha Shabaab iyo Daacish, ayna dawladu go’aansatay inay ka saarto deegaanada ay ku dhuumaalaystaan.
”Ciidanka Puntland waxay maalmaha ka wadeen hawlgalo deegaano hoostaga degmada Qandala, hawlgalada oo ahaa mid looga saarayay Burcad Diimeedka Daacish oo dhib badan ku haya shacabka reer Puntland ee dagan deegaanadaas, waxaan gaarsiinay khasaare looga gubay dhamaan wixii ay haysteen oo Raashin ahaa oo ku jiray Godad, waxaa laga qabtay agab ay ka samayn jireen qaraxyada oo ay ku dhibaatayn jireen shacabka” Ayuu yiri Siciid Dheere.
Wuxuu intaas ku daray…”Waxaa Ciidanku ay ka saareen dhul ay ku dhuumaalaysan jireen oo ay ka mid yihiin;-Xijiijle, Tuurmajaale, Afdharimeed, haraaryo, Qurac, daray-madow, Af-dudumo, Sheebaab, Dufaan, Dhaadaar iyo Buqo oo hoostaga degmada Qandala”.
Janaraal Siciid Dheere, ayaa hoosta ka xariiqay inay ku daba jiraan firxadka Kooxda Daacish, waxaana uu hambalyo u diray dhamaan ciidanka hawlgalka wada iyo hogaankooda.
Hadalkan Taliyaha Ciidanka Difaaca Puntland Janaraal Siciid Dheere, ayaa kuso beegmaya xilli Ciidamada Puntland ay hawlgalo ka dhan ah Shabaab iyo Daacish muddooyinkii ugu dambeeyay si xoog leh u wadeen.